Ilo wareedyo: DKMG ah taag uma heyso dagaal adag, waxaana dillooday dhaqaalo la’aan iyo maamul xumo. | Halganka Online
Ilo wareedyo: DKMG ah taag uma heyso dagaal adag, waxaana dillooday dhaqaalo la’aan iyo maamul xumo.
Posted on Febraayo 8, 2010 by halganka
Ilo wareedyo xog ogaal ah oo wargeyska Asharqal Awsat uu kasoo xiganayo gudaha DKMG ah ee Somaliya ayaa si la yaab leh u kashifay in hanjabaadaha madaxda dawladda ay muddo 4 bilood wadaan ugu yaraan ee ku aadan dagaal in ay qaadaan in ay tahay ”rajo isgalin” balse aaney waxba meesha ku heyn.
Ilo wareedyadaasi oo qaarkood ah dalalka Carbeed ee safiiradooda ay ka shaqeeyaan gudaha magaalada Muqdisho iyo dhinacyo kale oo Somali ah ayaa tilmaamay in DKMG ah hadda ay la daala dhaceyso musuq maasuq, maamul xumo iyo dhaqaalo la’aan taasi oo ay sii dheer tahay in aaney heyn ciidankii qaban lahaa goobaha ay doonayaan in Islaamiyiinta ay ka saaraan.
Wargeyska oo soo xiganaya ilo wareedyadaasi ayaa sii sheegaya in DKMG ay hadda wadaag ku yihiin dhinacyo aan islaheyn oo aan isku feker aheyn iyadoona aysan jirin ciidamo xoog leh oo howlgalka Milatari ka qeyb qaadan karta kuwaasi oo ka hortaga Islaamiyiinta Somaliya.
Warar khaas aan u helnay ayaa sheegaya in DKMG ah ay hadalladeeda ku aadan dagaalka ay dhaqaalo kaga baadi goobeyso dalalka caalamka ee taageera laakin waxaa intooda badan la sheehayaa shardi inay kaga dhigeen marka hore dagaalku in uu billowdo kadibna la bixinayo wixi tashiilaad ah ee loo baahdo.
Arrintaasi ah in DKMG ah ay la ildaran tahay maamul xumada ayaan ogeyn saraakiisha Ciidamada iyo ugu yaraan wasaaradda Gaashaan dhigga oo la sheegay dhankeeda diyaar garowga dagaa si dhab ah in ay u galeen, balse aaney jirin wax ay ku maareeyaan dagaaladaasi ay ku dhaaranayeen madaxdooda in ay noqon doonaan kuwo lagu soo afjaro jiritaanka Islaamiyinta.
Sidaasi oo ay tahay dawladda Itoobiya iyo ciidamada Tigreeda ayaa ah kuwa kaliya ee sida daacadnimada leh ula shaqeynaya DKMG ah, waxaana madaxda Tigreeda ay shirki Midowga Afrika hordhigeen canaan ku aadan in beesha caalamka aaney sidii loo baahnaa u taageereyn DKMG ah isla markaana dhaqaalihii la ballanqaaday waxba aan laga soo gaarsiin.
Balse si waliba oo ay ahaataba maalmihii u danbeeyay waxaa Muqdisho laga dareemay dhaqaaq Milatari oo maleeshiyada DKMG ah ay ka sameeyeen meelo kamid ah difaacyada la isku hor fadhiyo, iyadoona Islaamiyinta dhankooda ay diyaar garow xoog leh iyo dhaqaaq kaas liddi ku ah wadaan.
« Ciidamada Tigreega oo Ceelbarde ka kaxeystay dad lagu eedeeyay wiilkooda in ay kamid yahay Xubnaha Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. 2 Duyuurad Helicopter ah oo deegaanka Baraxley ee Gaalgacyo ka dajisay Saraakiil Mareykan ah oo kormeeraya dagaallada gobollada Dhexe. »